मोबाइल आयात १५ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आव २०७६/७७ को पहिलो तीन महीनामा मोबाइल सेटको आयात १५ प्रतिशतले बढेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आवको प्रथम त्रैमासिकमा ७ अर्ब १९ करोड बराबरको कुल १६ लाख २३ हजार ७९५ ओटा मोबाइल सेट आयात भएका हुन् ।
गत वर्षको साउनदेखि असोजसम्म ६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँका १३ लाख ६२ हजार ३०० ओटा मोबाइल सेट आयात भएका थिए । यो रकम यो वर्षको साउनदेखि असोजसम्मको तुलनामा ९० करोड कम हो । विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा साउन महीनाको तुलनामा भदौ र असोजमा मोबाइल आयात बढेको छ । चालू आवको पहिलो महीना अर्थात् साउनमा २ अर्ब रुपैयाँको मोबाइल सेट आयात भएको थियो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष मोबाइल सेट आयातमा भ्याट फिर्ताको सुविधा खारेज गर्ने सरकारको निर्णयले आन्तरिक बजारमा धेरै प्रभाव पारेको बताउँदै आएका आयातकर्ता मोबाइल आयातमा देखिएको पछिल्लो सुधारलाई केही मोबाइल कम्पनीको व्यापारमा आएको वृद्धि तथा ग्रे प्रोडक्ट निरुत्साहित गर्न मोबाइल आयातकर्ता सङ्घले लिएको अग्रसरताको प्रतिफल भन्न रुचाउँछन् ।
मोबाइल आयातकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष दीपक मलहोत्रा चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै बढी मोबाइल भित्रिनुका साथै सामसुङ तथा साओमीको बजारमा भएको उत्साहजनक विस्तारले समग्र आयात बढेको बताउँछन् । मोबाइल आयातमा भ्याट फिर्ताको सुविधा खारेजीले गत वर्ष ग्रे मार्केटबाट मोबाइल नेपाल भित्रने क्रम बढेको र वैधानिकरूपमा आयात भएका मोबाइलको विक्रीलाई असर पारेको उनले बताए ।
चोरी पैठारीको मोबाइल निरुत्साहित गर्न पछिल्लो समय मोबाइल आयातकर्ता संघले आफ्नै पहलमा होलोग्रामसहितको स्टीकर टाँसेर मोबाइल सेट बेच्ने अभियान शुरू गरेको छ । ‘यसले गर्दा ग्रे मार्केटबाट आएको मोबाइल सेट बेच्न रिटेलरहरू पनि हिच्किचाउन थालेका छन्,’ मलहोत्राले बताए ।
भन्सार विभागको आँकडाअनुसार चालू आवको पहिलो त्रैमासमा विभिन्न २३ मुलुकबाट मोबाइल आयात भएको थियो । तीमध्ये सबैभन्दा बढी चीनबाट रू. ३ अर्ब ३४ करोड बराबरको सेट आयात भएको छ । नेपालमा भित्रिने प्रायः सबै मोबाइल ब्रान्ड चीनमा एसेम्बल हुने हुँदा चीनबाट हुने आयात ठूलो भएको हो । यस अवधिमा चीनबाट १२ लाख ८९ हजार मोबाइल सेट आयात भएको छ ।
चीनपछि सबैभन्दा बढी आयात भारतबाट भएको छ । भारतबाट तीन लाख १२ हजार मोबाइल सेट आयात भएको भन्सार विभागको आँकडाले देखाउँछ । यी दुई मुलुकपछि नेपालमा धेरै मोबाइल आयात भियतनामबाट हुने गरेको छ । भियतनामबाट रू. ४३ करोड ६७ लाख मूल्य बराबरका २६ हजार मोबाइल सेट आयात भएको छ ।